Harare City FC Archives | 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Munashe Chokodza Jul 26, 2019
With a single point difference separating the two Harare teams on the latest Castle Lager log table, fading giants Dynamos and Harare City will square off for the precious three points at Rufaro tomorrow afternoon. The once glamorous…
Caps United Players Refuse 10 Bond Allowances
Munashe Chokodza May 7, 2019
After a fine start to the new Castle Lager Premier Soccer League season, Caps United dressing room was dodged by disturbing news and unrest after players refused to accept $180RTGS which was meant for their match allowance. A close…
NetOne Injects RTGS$170K To Black Rhinos Sponsorship Package
Lemuel chekai Mar 29, 2019
State-owned mobile network operator, NetOne today injected a RTGS$170 000 sponsorship to Zimbabwe National Army side Black Rhinos Football Club ahead of the new soccer season. Speaking at the unveiling ceremony held at Josiah Magama…
Harare City Ready For Chibuku Final
Munashe Chokodza Nov 9, 2017
Harare City will be giving it one last push to end their season with a trophy when they face How Mine in this year's Chibuku Super Cup finals set for Rufaro Stadium on Saturday. The Philan Ncube coached side will definitely be banking on…
Munashe Chokodza May 17, 2017